वर्णन मिडिया पुरोहितलाई कानूनी प्रशिक्षण दिँदै नेपाल प्रहरी - वर्णन मिडिया
मंगलबार, मंसिर ०३, २०७६ | Tuesday, November 19, 2019
सुदूरपश्चिम, कर्णालीलगायत पश्चिमी क्षेत्रमा ठूलो भूकम्पको झट्का * कालापानीको बिषयमा प्रधानमन्त्री लगायत ६०१ जनालाई किन जेल नहाल्ने ? * वर्तमान सरकारप्रतिको असन्तुष्टि मतदान मार्फत व्यक्त गर्नुपर्छ – प्रदीप पौडेल * निगमको तेल बोक्ने ट्याङ्ककर अपहरणकारीकाे कब्जामा * जीवन दर्शन ! * नयाँ ठाउँमा प्रदेशको राजधानी बनाउन उपयुक्त हुने : प्रचण्ड * पूर्व राजाको क्लब चर्चाबारे हाँस्यकलाकार दिपकराज गिरी यसो भन्छन् * ‘सरकार धाँधली गरेर भएपनि उपनिर्वाचन जित्ने कोशिसमा छ’: डा. महत * कांग्रेसको नजरमा सरकारका २१ महिनाका २१ असफलता * बिहान विद्यालय खोले कारवाही *
मंगलबार, मंसिर ०३, २०७६ Tuesday, November 19, 2019
पुरोहितलाई कानूनी प्रशिक्षण दिँदै नेपाल प्रहरी
२१-कार्तिक-२०७६ | ०८:५५:२२ am
नेपाल प्रहरीले कर्णालीका १० वटै जिल्लामा पुरोहितलाई कानूनी प्रशिक्षण दिएको छ । प्रदेश प्रहरी कार्यालयको निर्देशनमा जिल्लास्थित प्रहरीले बुधबार एकैसाथ विभिन्न धर्मगुरुलाई बालविवाह न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले प्रशिक्षण दिएको हो ।
प्रदेश प्रहरी प्रमुख एवं प्रहरी नायब महानिरीक्षक पूर्णचन्द्र जोशीले पुरोहितलाई कानूनीरूपमा सचेत गराए बालविवाह न्यूनीकरणमा ठूलो मद्दत पुग्ने बताए । “विवाह गराउने मुख्य जिम्मेवारी पुरोहितहरुकै हो”, उनले भने, “अभिभावक र बालबालिका तयार भए पनि पुरोहितले कानूनी व्यवस्थालाई देखाएर विवाह गर्न इन्कार गरे त्यो विवाह नै हुन सक्दैन ।”
कानूनले बालविवाहलाई अपराधको रुपमा परिभाषित गरेको छ । मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ मा बालविवाह गर्ने-गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र रु ३० हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । प्रहरीले पुरोहितहरुलाई यही व्यवस्थाबारे जानकारी गराउन जिल्ला–जिल्लामा प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो ।
प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले चालू आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा सल्यानमा बालविवाहका तीन मुद्दा दर्ता भएको जनाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सुर्खेत र दैलेखमा सात-सात, सल्यानमा तीन र जुम्लामा दुई गरी १९ मुद्दा दर्ता भएका थिए । त्यस्तै, प्रहरीले चालू आवको हालसम्मको अवधिमा बालविवाह गर्ने १७ जोडीलाई अभिभावकको जिम्मा लगाएको छ । अघिल्लो वर्ष प्रहरीले ५९ जोडीको उद्धार गरेको थियो ।
प्रदेश प्रहरी प्रमुख जोशीले झण्डै ५०० हिन्दू, बौद्ध, मुस्लिम र इसाईका धर्मगुरुलाई बोलाएर कानूनी प्रशिक्षण दिएको जानकारी दिए । प्रशिक्षणमा सुर्खेतमा १००, दैलेखमा ३९, कालिकोटमा ४१, जुम्लामा ५३, मुुगुमा २५, हुम्लामा २३, डोल्पामा ५१, सल्यानमा ९२, जाजरकोटमा ३२ र रुकुमपश्चिममा २३ पुरोहित सहभागी थिए ।
सुर्खेतका अगुवा पुरोहित तिलकप्रसाद रिजालले भने “बालविवाह, जातीय विभेदलगायतका कुरीतिको पक्षमा आफूहरु नरहेको बताउँदै कानूनी व्यवस्थाको पालना गर्न-गराउन हामी सधैँ प्रतिबद्ध छौँ ।”
वर्तमान सरकारप्रतिको असन्तुष्टि मतदान मार्फत व्यक्त गर्नुपर्छ – प्रदीप पौडेल
‘सरकार धाँधली गरेर भएपनि उपनिर्वाचन जित्ने कोशिसमा छ’: डा. महत
कांग्रेसको नजरमा सरकारका २१ महिनाका २१ असफलता
राधेराधेसम्म सोलार बत्ती राख्न शुरु
प्रचण्डपुत्र प्रकाशको स्मृतिमा दिदीहरूका भावुक केहि शब्दहरु
कम्युनिस्टहरुले जनतालाई धोका दिए, काँग्रेस लाई भोट दिनुहोस: महर
स्व. दाहालको स्मरण
मन्त्री पद बचाउन उपेन्द्र दिल्लीमा
किटानी जाहेरी दिदासमेत विष्टमाथि कुनै अनुसन्धान भएन: निर्मला पन्तकी आमा
पत्रिका वर्गीकरणको नतिजा सच्याउन माग
त्रिविबाटै नक्कली लब्धांकपत्र र चारित्रिक प्रमाणपत्र
काङ्ग्रेसमा प्रबेश गर्नेहरुको लहर
शौचालयबारे निर्धक्क कुरा, स्वास्थ्य र सफाईका लक्ष्य हुन्छन् पूरा
यसकारण जित्दैछ कांग्रेस प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा उपनिर्वाचन
संविधानले राेक्याे वामदेव र नारायणकाजीलाई मन्त्री बन्न
सुदूरपश्चिम, कर्णालीलगायत पश्चिमी क्षेत्रमा ठूलो भूकम्पको झट्का
कालापानीको बिषयमा प्रधानमन्त्री लगायत ६०१ जनालाई किन जेल नहाल्ने ?
निगमको तेल बोक्ने ट्याङ्ककर अपहरणकारीकाे कब्जामा
जीवन दर्शन !